विराटनगरको दरैयास्थित उखुबारीमा युवकको शव फेला विराटनगरमा ६ बजेपछि बजार बन्दः व्यापारी भन्छन्–दिनभरी केही नहुने, ६ बजेपछि मात्र कोरोना सर्ने हो ? विराट व्यापार संघ किन मौन ? रााष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीद्वारा राजीनामा दिने घोषणा उद्योगी–व्यवसायीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीसँग महासङ्घको आग्रह लागुऔषध कारोवार गर्ने १५१ जना पक्राउ बेच्न लैजाँदै गरेका बालिकालाई धम्की दिएर बयान फेर्न लगाएको आरोप
माधव पक्ष विभाजित- नेपालसहित केही सांसद देउवाको पक्षमा, अरु ‘नो भोट’मा
2021-07-18 08-07 | Hamro Biratnagar
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह विभाजित भएको छ । नेपालसहित समानुपातिक सांसद र अन्य केही प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले विश्वासको मत दिने भएका छन् ।
तर वार्ता कार्यदलमा रहेका सुरेन्द्र पाण्डेसहित अन्य प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भने ‘नो भोट’ को पक्षम उभिने भएका छन् । संसद सचिवालयले विश्वासको मतको पक्ष वा विपक्षमा मत दिन नचाहने सांसदको लागि ‘मत दिन्न’ भन्ने अलग्गै व्यवस्था समेत गरेको छ ।
संसद जोगाउन चाहिने वहुमत देउवाको पक्षमा पुगेकाले माधव पक्षका केही सांसद नो भोटमा जान लागेका हुन् । नेपाल पक्ष अहिले पनि छलफलमा छ ।